Waa kuwee Shanta Xiddig ee loogu raadiska badanyahay Yahoo sanadka 2012. - iftineducation.com
Waa kuwee Shanta Xiddig ee loogu raadiska badanyahay Yahoo sanadka 2012.
iftineducation.com – Waxaa si aada loo baaraa ama loo raadiyaa xiddigaha magaca ku leh aduunka ha noqdeen kuwo heesaa ah ama kuwa jilaa ah intaba, waxaana lasoo saaray shaqsiyaadka loogu barista badanyahay Yahoo-ga sanadkaan 2012 si wax looga ogaado noloshooda.
1. Kim Karadashiyan waxay noqotay qofta loogu baarista badanyahay Yahoo! Inkastoo dadweynaha qaarkood ay ku kacsanyihiin oo lagu tilmaamo qof aan sumcad leheyn, hadana waxay nambar kow ka tahay dadkaan la baaro taariikh nololeedkooda. Waxaana sida badan magaca ay ku heshay Kim shaqsiyaadka caanka ah ay soo martay sida xiddiga kubada kolayga “Chris Hamfires” oo ay kala tageen iyo Kanye West oo hada ay wada socdaan.
2. Boosla labaad waxaa qabsatay xiddigta ahna modelka Kate Abton, waxayna kamid noqotay shaqsiyaadka loogu baarista badanyahay Yahoo sanadkaan 2012.
3. Sedaxaad waxaa noqotay Lindsay Lohan oo heshay shacab badan oo magaceeda raadiya.
4. Afaraad fanaanada caanka ah ee Jennifer Lopez oo iyadu ah qof aad loo jecelyahay taageero farabadana ku leh daafaha aduunka.
5. Kaalinta shanaad waxaa ku dhegtay fanaanada muuqaalka qurxoon Katie Perry taas oo soo jiidatay indhaha dadyow fara badan.
Fanaanka Weyn Dalmar Yare Oo Banaanka Keenay Muuqaalka Gabadhii Uu Guursan Lahaa (Daawo Sawirada)